Wasaaradaha internetka - Howlaha Gargaarka Masiibada
Wasaarada Caawimada Musiibooyinka waxay bixisaa cunto bilaash ah, qalab yar / alaabta jikada iyo kuwa iskaa wax u qabso ku shaqeeya si ay uga caawiyaan nadiifinta dhibbanayaasha dhammaan noocyada musiibooyinka dabiiciga ah - daadadka, harikooyinka, duufaanada, dabka, dhulgariirka iwm. ujeedada ah in la dejiyo daraasado bible ah oo ku saabsan meelaha aan ku caawino. Iyadoo gacan ka helaysa kaniisadaha maxaliga ah ee aagagga ay dhibaatadu saameysey, waxaan awoodnaa inaanu u adeegno sida dad badan oo 4,000 ah maalin kasta oo leh jikadeena moobiilka.
Waxaan isku daynaa in aan la wadaagno jacaylka iyo fahamka Ciise iyaga. Waxaan rabnaa inay ogaadaan in Ilaahay daneeyo oo aan sidoo kale sameyno. Sababtoo ah dadaalada mutadawiciinta ee shaqadan adeegayaasha guriga, boqolaal daraasado bible ah ayaa la sameeyay waxaana ognahay dad badan oo lagu baabtiisay Masiixa. Tan ugu muhiimsan, mutadawiciinadu waxay halkaa joogaan si ay u caawiyaan kaniisadda maxaliga ah.
Mike Baumgartner, Madaxwayne / Agaasime
E-mail: Cinwaanka email Tan waxaa lagu dying from corruption. Waxaad u baahan tahay Add to view.